Taliye Ku-xigeenka Sirdoonka Qatar Oo Socdaal Qarsoodi Ah Ku Tagay Muqdisho – somalilandtoday.com
Taliye Ku-xigeenka Sirdoonka Qatar Oo Socdaal Qarsoodi Ah Ku Tagay Muqdisho
(SLT-Muqdisho)-Warar lagu kalsoonaan karo oo aanu helnay ayaa sheegaya in Taliye ku-xigeenka Sirdoonka Qatar uu maalin ka hor safar qarsoodi ah oo qaadatay hal maalin uu ku yimid magaalada Muqdisho ee Caasimadda dalka Soomaaliya.
Taliye ku-xigeenka oo ay wehliyeen Saraakiil kale ayaa kulamo la qaatay Taliyaha Hey’adda Nabadsugida iyo Sirdoonka Soomaaliya Mr Fahad Yaasiin oo bishii hore si buuxda xilka Taliyaha loogu magacaabay, kaddib muddo sannad ku dhow oo uu Sii haye ka ahaa Hey’adda.
Qatar ayaa saameyn weyn oo qoto dheer ku leh Hey’addaha Amniga iyo Sirdoonka Soomaaliya, iyadoo la sheego inay taageero gaar ah siiso Hey’adda Sirdoonka ee uu hoggaankeeda haayo Mr Yaasiin oo xidhiidh dhow la leh Qatar.
Labadii sanno ee u dambeeyay saameynta Qatar ee Soomaaliya ayaa sii xoogeysaneysay, iyadoo si dhow u taageerto dowladda uu hoggaamiyo Madaxweyne Farmaajo, waxaana jiray booqasho dhowr ah oo Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ku tageen Doxa.
Bishii hore ayaa waxaa booqasho ku yimid Muqdisho Ra’iisul Wasaare kuxigeenka Qatar ahna Wasiirka Arrimaha Dibadda, waxaana uu ahaa Mas’uulkii ugu heerka sareeyay ee soo booqda Soomaaliya, tan iyo sanadkii 2015, waxaana Qatar ay haatan mallaayiin doollar ku bixineysa mashaariic kala duwan oo ay ugu weyn tahay dhismaha Dekeda Hobyo ee Gobolka Mudug.